GEERIDII NABIGA (SCW) .
Bishii Safar sanadkii 11aad ee Hijriga waxaa Nabiga (SCW) ku billowday xanuunkii uu u geeriyooday.
Nabiga (SCW)geeridiisa Ilaah baa ogaysiiyay sidii Nabiyadii ka horreeyayba loo ogaysiin jiray, wuxuna asxaabta u sheegay inaanu Nabi dhiman ilaa la kala doorransiiyo labada daarood (Adduun iyo Aakhiro). Waxaa kale oo jiray arrimo badan oo muujinayay Nabiga (SCW) geeridiisa, waxana kamid ahaa:
1- Nabiga (SCW) oo markuu Mucaad binu Jabal (RC) Yaman u dirayay ku yiri: "Waxaa laga yaabaa in aynaan mar dambe is arag ood soo martid masjidkaygaan iyo qabrigayga".
2- Bishii Soon-qaad ee ugu dambaysay Nabigu (SCW) wuxuu ictifaakay 20 beri (Ictikaaf waxa weeye Masjidka oo la fariisto, laguna cibaadaysto waqti aan waqtiyada Salaadda ahayn) , halka uu Soon-qaadyadii ka horreeyay 10 beri ictikaafi jiray.
3- Isla Soon-qaadkaas wuxuu Malakul Jibriil (Calayhi Salaam) Qur'aanka Nabiga (SCW) la khatimay laba jeer halka uu kuwii hore hal mar la khatimi jiray.
4- Xajatul-Wadaac oo ahaa xajkii ugu dambeeyay ee uu Nabigu (SCW) dadka xajisiiyay wuxuu asxaabta maalinkii Shaydaan-tuurka ku yiri: "Manaasiktiinna iga qaata (qaabkii aad u xajin lahaydeen iga barta), waxaa laga yaabaa in aanan sanad dambe soo xajine". Markii Carafo la taagnaana wuxuu yiri: "Waxa laga yaabaa in aanan sanadkaan kaddib weligay halkaan idinkula kulmin".
5- Markuu Xajku dhammaaday ee lagu jiray Maalmihii Hilbo-Waradka waxaa soo degtay Suuratul Nasri oo calaamad u ahayd geerida Nabiga (SCW).
6- Sidoo kale Qur'aankii ayaa la taam yeelay oo waxaa soo degay Aayadihii ugu dambeeyay.
7- Nabigu (SCW) asxaabta wuxuu ku yiri: "Ma idin gaarsiiyay (Diintii)". Oo uu weliba Saddex jeer ku celceliyay, mar walbana waxay lahaayeen: "Haa", markaasna wuxuu lahaa: "Allow ka markhaati noqo".
Nabigu (SCW)wuxuu billaabay tabaabushe iyo diyaargarow xagga Rabbi ah. Wuxuu aad u badiyay Tasbiixdii iyo Istiqfaartii sida uu Alleba ugu amray Suuratul Nasri. Sidoo kale, Nabigu (SCW) wuxuu billaabay sagootin, wuxuna bilowgii bishii Safar, sanadkii 11aad ee Hijriga, tegay Xawaalihii (Qabuurihii) dadkii Uxud ku shahiiday, wuuna kusoo tukaday, soona sagootiyay. Kaddib wuxuu ku soo laabtay Masaajidka, wuxuuna la hadlay dadkii muslimiinta ahaa, kuna yiri: "Anigu waan idiin dhammaystiray (Diintii), markhaati ayaanan idinku furayaa. Ilaah baan ku dhaartaye waaba anigoo hadda arkaya Darkaygii (Halkaan Jannada ka geli lahaa), waxana la i siiyay furayaashii khasnadaha dhulka, aniguna Ilaah baan ku dhaartay ka baqi maayo in aad gadaashay Gaalnimo u noqotan, laakiin waxaan ka baqayaa in aad ku tartantaan (Adduunyada)".
Sidoo kale, Nabigu (SCW) goor ay habeen bar tahay ayuu cid u diray adeegihiisii Abuu Muwayhib, markuu u yimidna wuxuu ku yiri: "Abaa Muwayhibow waxaa la'i amray inaan u dembi-dhaaf weydiiyo Baqiicaan dadka ku jira, ee i raac". Abuu Muwayhib oo sheekaynayaa wuxuu yiri: "Markaas baan raacay. Markuu Qabuurihii dul istaagay, wuxuu yiri: "As-Salaamu calaykum yaa Ahlal-Maqaabir (Nabadi korkiinna ha ahaato dadka Qubuuraha ku jiroow). Waxaan idiinku hambalyaynayaa xaalkiinna, marka loo eego xaalkay dadku (kuwa nool) ku suganyihiin. Fidnadii oo sidii Habeen gudcur ah baa soo gashay, iyadoo is daba haysata, midibana midday kasii dambayso kasii shar badan tahay". Markaas buu intu isoo eegay, wuxuu yiri: "Abaa Muwayhibow waxaa la 'i siiyay furayaasha Khasnadaha Adduunka iyo inaan ku waaro (Weligay aan noolaado), kaddibna Janno (Aan galo), waxaanan taas ka doortay kulanka Alle iyo Jannada". Waxaan iri: "Aabbahay iyo hooyaday lagugu furaye, qaado furayaasha Adduunka, kuna waar, keddibna Jannada". Wuxuu yiri: "Ilaah baan ku dhaartaye Abaa Muwayhibow Maya, waxan doortay kulanka Rabbigay iyo Jannada". Kaddib wuxuu u dembi-dhaaf weydiiyay Ehlul Baqiic, intaas kaddibna wuu ka tegay".
Nabigu (SCW)maalinkii Isniinta, 29kii Safar, sanadkii 11aad ee Hijriga, ayuu ka qayb galay Janaaso lagu xabaalayay Qabuuraha Baqiic. Markuu kasoo laabtayna isagoo dhex soo maraya ayaa waxaa qabtay Madax xanuun iyo Qandho. Caa'isha (RC) waxay tiri: "Nabiga Alle (SCW) Baqiic buu kasoo laabtay, markaas buu ii yimid anigoo madaxu i wareerayo, lehna: "Ar Madaxa". Markaas buu yiri: "Mayee wallaahi Caa'ishooy aniga ar Madaxa". Markaas buu yiri: "Ma dhib baad qabtaa haddaad hortay dhimato, oon ku kafaniyo, kuguna tukado, kaddibna aan ku aaso?". Waxaan markaas iri: "Wallaahi haddaad saas yeesho, waxaa ii muqata intaad aqalkayga usoo laabato inaad naago ku guursanaysid". Markaas buu dhoola caddeeyay".
Nabigu (SCW)isagoo xanuunsan buu dumarkiisa midba habeenkeeda u hoyanayay, wuxuna mar walba lahaa: "Berri xaggeen ahay, Berri xaggeen ahay?", ilaa uu xanuunkii aad u qabtay isagoo guriga Maymuuna (RC) jooga. Markaas buu haweenkiisii isugu yeeray, idanna u weydiistay in guriga Caa'isha (RC) uu iska joogo, laguna bukaan dhawro, wayna u oggolaadeen. Markaas bay Fadli ibnu Cabbaas iyo Cali ibnu abii-Dhaalib (RC) garbaha ka galeen isagoo maduxu u duubanyahay, lugahana dhulka ku jiidaya, waxayna geeyeen gurigii Caa'isha (RC), halkaas ayuuna joogay usbuucii ugu dambeeyay noloshiisa.
Maalin Arbaco ah (Shan maalmood kahor geeridiisii) ayaa waxaa Nabiga (SCW) qabtay xanuun aad u daran oo uu la miyir beelay. Markaas wuxuu yiri: "Igu shuba toddoba Wadaamood oo (Biyo) Ceelal kala duwan laga keenay, si aan dadka ugu soo baxo oon ula dardaarmo". Markaas intay Baaf ay Xafsa (RC) lahayd dhex fariisiyeen, bay ku shubeen biyihii ilaa uu ka yiri: "Bes, bes". Markaas buu intuu xoogaa fudayd ah dareemay, isagoo maduxu u duubanyahay Masaajidkii soo galay, mimbarkiina ku fariistay. Wuxu u khudbeeyay dadkii wuxuna yiri: "Lacnad Alle ha ku dhacdo Yuhuud iyo Nasaaro, Qubuurihii Nabiyadooda ayay masaajid ay ku tukadaan ka dhigteen". Wuxuu intaas ku daray: "Haka dhigannina Qabrigayga Sanam la caabudo".
Kaddib, Nabigu (SCW) wuxuu dadkii u bandhigay in ciddii uu wax u geystay ay ka aargudato, isagoo leh: "Qofkaan dhabarka ka karbaashay waa kan dhabarkaygiiye haka aarguto, qofkaan Qoyskiisa caayayna waa kan Qoyskaygiiye haka aarguto".
Salaadii Duhur ayuu dadkii tujiyay, wuxuuna mar kale ku fariistay mimbarkii isagoo ku celinaya hadalladiisii hore. Markaas buu nin muslimiinta kamid ahi yiri: "Saddex Dirham baan kugu leeyahay". Nabigu (SCW) wuxuu yiri: "Fadliyoow sii" (Fadli wuxu ahaa Nabiga (SCW) ina adeerkiis oo waxa dhalay Cabbaas ibnu Cabdil-Mudhalib).
Intaas kaddib, wuxuu ku dardaarmay in Ansaar la wanaajiyo, isagoo leh: "Ansaar baan idinkala dardaarmayaa. Waa calooshayda iyo ceebtayda. Wixii lagu lahaa way guteen, waxay iyagu lahaayeen baase haray. Koodii wanaag sameeya ka aqbala, koodii xume sameeyana iska cafiya".
Nabigu (SCW)intaas kaddib wuxuu yiri: "Addoon buu Alle kala doorransiiyay Adduunyada Ubaxeeda intuu ka doono iyo waxa (Alle) agtiisa ah, markaas buu waxa Alle agtiisa ah doortay". Abuu Saciid Al-Khudriy (RC) wuxuu yiri: "Abuubakar baa markaas ooyay, oo yiri: “Aabbayaasheen iyo hooyooyinkeen lagugu furay (Rasuulkii Alloow)”. Waanan la yaabnay. Nin meesha fadhiyay baa yiri: "Bal eega odoygaan, Rasuulkii Alle ayaa ka sheekaynaya Addoon Alle kala doorrinsiiyay Adduunyada inuu siiyo iyo waxa agtiisa ah, asna wuxu leeyahay Aabbayaasheen iyo hooyooyinkeen lagugu furay". Abuu Saciid wuxuu yiri: "Nabigu wuxuu Addoonka ula jeeday naftiisa, Abuubakar horteen gartay".
Markay intaasi dhacday buu Nabigu (SCW) yiri: "Dad waxan isugu hallayn ogahay xag saaxiibtinimo iyo xag maalba Abuubakar, haddaan Khaliil (Saaxiibka jacaylka aad u qabtaa Qalbigaaga buuxiyo) aan Rabbigay ahayn samaysan lahaana Abuubakar baan Khaliil ka dhigan lahaa, laakiin waa saaxiibtinimo walaaltinimo iimaan, intuu Alle agtiisa inooga kulminayo". Wuxu misana yiri: "Fiiriya Albaabbadaan Masaajidka kusoo furan, ee wada xira intaan Albaabka Abuubakar ka ahayn, maxaa yeelay Axad saaxiibtinnimadiisa iiga wanaagsan ma ogi".
Maalintii Khamista (Dhimashadiisa 4 beri kahor) ayuu asxaabtii ku yiri: "Kaalaya aan idiin qoro warqad aydnaan gadaasheed lumayne". Markaas ayuu Cumar (RC) yiri: "Nabiga (SCW) xanuunkii baa ka adkaaday, waxadna haysataan Qur'aankii oo waxa idinku filan Kitaabka Alle". Dadkii ayaa markaas is khilaafay oo dooday, iyagooy qaar raacsanyihiin hadalkii Cumar qaarna leeyihiin: "U keena Nabigu (SCW) warqad ha idiin qoree". Markii xoogaa la buuqay buu Nabigu (SCW) yiri: "Iga ag dhaqaaqa".
Nabigu (SCW)isagoo aad u jirran buu maalinkaas Khamiista ah asxaabta Salaaddii Maqrib tujiyay, wuxuna ku akhriyay Suuratul Mursalaat. Salaaddii xigtay ee Cishaha wuxuu damcay inuu masaajidka soo aado, laakiin wuu awoodi kari waayay. Caa'isha (RC) waxay tiri: Nabigu (SCW) wuxu yiri: "Dadkii ma tukadeen?", markaas baan iri: "Maya Rasuulkii Allow, adigay ku sugayaan". Wuxuu yiri: "Suuliga biyo ii geeya". Waan u geynay, wuuna soo qubaystay. Markuu istaag is yiri buu suuxay. Markuu soo miyirsaday buu misana yiri: "Dadkii ma tukadeen?". Mar labaad iyo mar saddexaad buu istaag is yiri sidii markii koowaad buuna mar walba u dhacayay una suuxayay.
Markuu soo naaxay wuxuu yiri: "Fara Abuubakar dadka ha tujiyee". Caa'isho (RC) ayaa tiri: "Rasuulkii Alloow Abuubakar waa nin qalbi jilcan, cod gaaban, Qur'aanka markuu akhrinayana oohin badan". Mar kale ayuu yiri: "fara dadka ha tujiyee". Mar kale bay sidiiyoo kale ku celisay. Markaas buu yiri: "Waxaad tihiin (Haweenkiinnu) Yuusuf saaxiibbadiis, fara dadka ha tujiyee". Caa'isho (RC) waxay tiri: "Ilaah baan ku dhaartaye wax kale sidaas umaan dhahayne waxan rabay in arrintaas Abuubakar laga daayo, maxaa yeelay waxan ogaa inaanay dadku weligood jeclaanayn qof booskiisa (Nabiga) istaaga, wax kastoo dhacana ay ku sharaysanayaan. Markaas waxan jeclaa in arrinka Abuubakar laga leexiyo".
Maalinkii Sabtida ama Axadda ayuu Nabigu (SCW) fudayd iska dareemay. Markaas buu isagooy laba nini garbaha hayaan Salaaddii Duhur usoo baxay Abuubakar oo dadka tujinaya. Abuubakar (RC) baa markuu arkay yare dib u baxay, hase yeeshee Nabigu (SCW)wuxuu u ishaaray inuusan dib u bixin, wuxuna yiri: "I fariisiya dhinaciisa", fariisiyeen Abuubakar dhinaciisa bidixo markaas bay. Abuubakar wuxuu markaas iska doondoonayay Salaaddii Nabiga (SCW), wuxuuna dadka maqashinayay Takbiirtiisa.
Maalinkii Axadda (geeridiisii hal maalin kahor) ayuu Nabigu (SCW) xoreeyay Addoomadiisii, wuxuna sadaqaystay toddobo Diinaar oo uu lacag oo dhan ka haystay, Hubkiisiina muslimiinta ayuu u qaybiyay. Isla habeenkaas Gaaskii Faynuusta Caa'isho (RC) waxay kasoo daynsatay deriskeeda. Canbuur bireedkiisii dagaalka nin Yuhuudi ah baa 30 Saac oo Qamadi ah oo uu Nabigu (SCW) ka qaatay rahan ahaan uga haystay.
Aanas inbu Maalik (RC) wuxu yiri: "Muslimiinta oo tukanaya Salaaddii Fajarka, subaxdii Isniinta, Abuubakarna dadka tujinayo, ayuu Nabigu (SCW) si kedis ah ugu soo baxay. Wuxuu Daaha ka fayday Qolkii Caa'isho, wuxuna soo fiiriyay dadkii tukanayay iyagoo safafkii ku jira, markaas buu intuu u bogay u dhoola caddeeyay. Abuubakar baa markaas dib-u-gurtay isagoo u malaynaya inuu Nabigu (SCW) doonayo inuu Salaadda usoo baxo. Dadkii baa markaas ku sigtay inay Salaadda ka baxaan farxad ay Nabiga (SCW) (Caafimaadkiisa) ku faraxsan yihiin darteed. Nabigu (SCW) wuxuu markaas dadkii gacanta ugu haadiyay inay Salaaddooda dhammaystirtaan, qolkiisii buuna dib u galay, daahiina usii daayay". Dadkii kolkay Salaaddii ka bexeen bay kala tageen iyagoo u haysta in Nabiga Alle (SCW) uu bogsoosay, Abuubakarna wuxuu aaday reer magaalada geeskeeda kale u degganaa.
Isla maalinkaas Isniinta, Barqadii buu xanuunkii Nabiga (SCW) kusoo laba-kacleeyay. Markaas buu gabadhiisii Faadumo (RC) u yeeray. Markay u timid, waxay aragtay Rasuulkiiyoo (SCW)xanuun aad u darani hayo. Markaas bay tiri: "Aabbow waad dhibaataysan yahay". Markaas buu (SCW) wuxuu ku yiri: "Maanta kaddib aabbahaa ma dhibaatoon doono". Intuu u yeeray ayuu dhegta wax ugu sheegay, markaas bay oyday. Markaas buu mar kale u yeeray oo dhegta wax ugu sheegay, markaasna way qososhay. Goor dambe kolkii Faadumo (RC) la weydiiyay arrinkaas waxay tiri: "Wuxuu markii hore ii sheegay xanuunka haya inu u dhimanayo, markaas baan ooyay. Markii kalena wuxuu ii sheegay inan ahay qofka ugu horreeya Ehelkiisa oo ka daba tegi doona, markaas baan qoslay".
Nabigu (SCW) isagoo Caa'isha ku santeecsan baa waxaa usoo galay Cabdiraxmaan binu Abiibakar (Caa'isha walaalkeed) (RC) oo caday (rumay) wata. Markaas bay Caa'isha aragtay Nabiga (SCW) oo cadayga eegaya, waxayna fahamtay inuu rabo. Waxay tiri: "Ma kaaga qaadaa?", isna madaxa ayuu ugu haadiyay: "Haa". Markaas bay uga qaadday oo intay dhinacii kale ka ruugtay siisay. Waxa hortiisa yaallay weel ay biyo ku jiraan. Weelkaas buuna intuu gacanta geliyo Wejiga iska marinayay isagoo leh: "Laa Ilaaha Illallaah, wallee geeridu sakaraad bay leedahay".
Markuu cadaygii dhammaystay, gacantiisa ama fartiisa ayuu kor u taagay isagoo saqafka aqalka eegaya, bushimahana dhaqdhaqaajinaya. Caa'isha ayaa markaas dhegta u raaricisay waxa uu sheegayo, wuxuna lahaa: "Alloowga mid dhig kuwa aad u nimcaysay ee ahaa Nabiyada, runlowyaasha, shuhadada iyo kuwii suusuubbanaa. Ilaahow ii dembi dhaaf iina naxariiso, ina gaarsii Rafiiqii sarreeyay, Eebboow rafiiqii sarreyay". Saddex jeer buu ku celceliyay: "Rafiiqii sarreeyay i gaarsii", gacantiisiina markaas way dhacday, wuxuna aaday Rafiiqii sarreeyay. Innaa lil-Laahi wa Innaa ileyhi raajicuun.
Nabigu (SCW) wuxuu geeriyooday Maalintii Isniinta, 12kii Mowliid (Rabiicul-Awal), sanadkii 11aad ee Hijrida, Waqti Duhur ah, wuxuna markaas jiray 63 sano.
Warkii geerida Nabiga (SCW) ayaa magaaladii galay, markaas bay Madiina gebigeed mugdi noqotay. Aanas ibnu Maalik, adeegihii Nabigu wuxuu yiri: "Weligay ma arag maalin ka fiican kana Nuur badan maalintuu Nabiga Alle inoo yimid, weligayna ma arag maalin ka foolxun, kana mugdi badan maalintuu Nabigu (SCW) geeriyooday".
Markuu Nabigu (SCW) geeriyooday, gabadhiisii Faadumo (RC) oo ooyaysaa waxay tiri: "Aabbeheeyoow, Rabbi u yeeray buu ajiibay, aabbeheeyoow, Jannadii Firdoowsuu abbaary, aabbeheeyoow, Jibriil baan uga tacsiyaynay".
Asxaabtii Nabiga warkaas geeridu wuxuu ku noqday argagax iyo fajiciso. Waxaa ku dhacday Musiibadii ugu weynayd ee abid ummad islaam ah ku dhacda. Waxaa ka geeriyooday rasuulkoodii iyo macallinkoodii, waxana halkaas ku go'ay waxyigii Samada uga imaan jiray. Way wada agoontoobeen, qof walbaana wuxuu raadsaday geed uu keligiis ku hoos ooyo. Dadkii waxay u kala bexeen qaar suuxsan oo maahsan, qaar warka rumaysan la' oo u qaba in been loo sheegayo iyo qaar dhabtii dhadhamiyay oo iska barooranaya.
Cumar binu Khadhaab (RC) wuxuu kamid ahaa dadkii warka geerida Nabigu (SCW) uu ka daadegi waayay oo rumaysan waayay. Intuu Masaajidkii ka istaagay buu isagoon is ogayn yiri: "Niman munaafaqiinta kamid ah baa waxay leeyihiin "Rasuulkii Alle waa dhintay". Rasuulkii Alle ma dhimane rabbigiis buu aaday, siduu Muuse ibnu Cimraanba Rabbigiis u aaday, wuxuna maqnaa Afartan maalmood. Markii la yiri wuu dhintay kaddibna wuu soo laabtay. Ilaah baan ku dhaartaye Rasuulkii Alle wuu soo noqonayaa lugaha iyo gacmaha ayuuna ka jarayaa kuwii yiri wuu dhintay".
Cumar (RC) oo dadkii sidaas ugu gooddinaya, ayaa waxaa yimid Abuubakar (RC) oo Faras saaran, kana yimid guri uu ku lahaa magaalada geeskeeda kale. Masaajidkii buu galay, isagoon cidna la hadlinna Caa'isha (RC) u galay, una tegay Rasuulkii (SCW) ooy maro ku daboolan tahay. Intuu maradii ka rogay, wejigana ka dhunkaday buu isagoo ooyaya hab siiyay, kuna yiri: "Aabbahay iyo hooyaday lagugu furaye, Alle laba jeer ku dili maayo, dhimashadii Ilaah kuu qorayna waad dhimatay".
Dabadeed Cumar oo dadkii sidii u hortaagan buu masaajidkii kusoo laabtay, wuxuuna ku yiri: "Cumaroow fariiso". Cumar ma aanu fariisan. Abuubakar (RC) markuu arkay in aanu Cumar warkiisa dhega u lahayn buu khudbad billaabay. Dadkii baa markaas Cumar kasoo tegay oo isaga khudbaddiisii inay dhagaystaan billaabay. Abuubakar (RC) Markuu Alle ku mahadiyay, wuxu yiri: "Intaas kaddib, qofkiinnii Maxamed "SCW" caabbudi jirayoow, Maxamed waa dhintay, qofkiinniise Alle caabbudi jiroow, Alle waa noolyahay mana dhimanayo". Wuxuu markaas akhriyay Aayaddaan:
(Maxamed wax kale maahee waa Rasuul ay Rusul badani hortiis tagtay, ee hadduu dhinto ama la dilo ma raadkiinnii baad ku noqonaysaan "ma gaaloobaysaan", qofkii raadkiisa ku noqdaa Alle waxba ka dhibi maayo, Allena wuxuu abaalmarin doonaa kuwa ku mahadiya) (Suurat Aala Cimraan: 144).
Ibnu Cabbaas (RC) wuxuu yiri: "Waaba sidii iyadoo aanay dadku ka warqabin inu Alle Aayaddaas soo dejiyay ilaa uu Abuubakar akhriyay. Markaas bay gebigood ka daba akhriyeen, qof bina Aadan ah oon akhrinaynna ma aanu jirin".
Cumar ibnul-Khadhaab (RC) waxa laga weriyay inuu yiri: "Ilaah baan ku dhaartaye Abuubakaroo (Aayaddaas) akhrinaya markaan maqlay uun baan garowsaday in Nabigii "SCW" dhintay, markaas bay sidii wax la boqna gooyay lugihii i celin waayeen, markaasaan dhulka ku dhacay".
Nabiga (SCW) waxaa la dhaqay Talaadadii ka dambaysay maalinkii Isniinta ee uu dhintay, isagoon dharkiisii laga faydin, waxana dhaqistiisa u istaagay adeerkiis Cabaas iyo laba wiil oo uu dhalay oo kala ahaa Fadli iyo Quthum oo rogrogayay, Cali binu Abii-Dhaalib oo dhaqayay, Usaama binu Zayd iyo Shuqraan oo Nabiga (SCW) adeegihiisa ahaa oo iyaguna biyaha ku shushubayay. Nabiga (SCW) waxa lagu kafaniyay saddex Maro oo cad cad oo aysan mid la tolay iyo cimaamadiba ku jirin.
Keddib, waxa laga wada hadlay halkii lahaa Nabiga (SCW)lagu aasi. Abuubakar (RC) baa yiri: "Waxaan maqlay Nabiga Alle (SCW) oo leh: "Nabi kasta oo la oofsado waxaa lagu xabaalaa halkii uu ku dhintay". Abuu-Dalxa (RC) ayaa markaas kor u qaaday gogoshii uu Nabigu (SCW) ku geeriyooday, Qabrigii lagu aasi lahaa buuna ka hoos qoday, kaddibna dadkii ayaa ugu soo galay toban toban iyagoo ku tukanaya, qof imaam u ahina ma aanu jirin.
Waxaa ugu horrayntii ku tukaday Raggii ehelkiisa, dabadeedna Muhaajiriintii, dabadeedna Ansaartii. Raggii kolkay ku wada tukadeen, baa waxa iyana ku tukaday dumarkii, kaddibna carruurtii, maalinkii Talaadaad oo dhamina saas buu ku dhamaaday.
Nabiga (SCW) habeenkii Arbacada Saqdii dhexe ayaa la aasay.
Sallallaahu calayka yaa Rasuulal-Laah. Alloow kuwa Jannada kula rafiiqaya inaga mid dhig. Alloow kuwuu Aakhiro u shafeecayo naga mid dhig. Alloow kuwa darka kala cabaya naga mid dhig. Aamiin, Aamiin, Aamiin